WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Qaabkii Ay Saxaafada, Kabtanada & Tababarayaasha Xulalka Qaramada Aduunku Ugu Kala Codeeyeen Ciyaartoydii Ku Tartamayay Abaal Marinta Xidiga Aduunka Ugu Fiican Ee Ay FIFA Bixisay. – WWW.Gool24.net
WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Qaabkii Ay Saxaafada, Kabtanada & Tababarayaasha Xulalka Qaramada Aduunku Ugu Kala Codeeyeen Ciyaartoydii Ku Tartamayay Abaal Marinta Xidiga Aduunka Ugu Fiican Ee Ay FIFA Bixisay.
Mahamoud Batalaale January 10, 2017
Waxaa la bixiyay abaal marinihii ugu fiicnaa ee sanadkii 2016 ee uu xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA sanad kasta bixin jiray waxaana abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ku guulaystay Cristiano Ronaldo oo abaal marintan ka qaaday Lionel Messi iyo Antoine Griezmann. Waxaa sidoo kale tababaraha aduunka ugu fiican ku guulaystay Claudio Ranieri.
Haddaba Shabakada Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa wax kasta oo aad uga baahan tahay qaabkii ay codka ubixiyeen kabtanada iyo tababarayaasha xulalka qaramad aduunka oo dhamaystiran si la mid ah codkii ay saxaafada aduunku ka dhiibatay abaal marinta xidiaga aduunka ugu fiican.
Marka hore aan idin xusuusino in kabtan kasta iyo tababare kasta si la mid ah saxaafada aduunka in uu leeyahay saddex cod. Codka kaalinta kowaad waxa lagu helaa 5 dhibcood, codka kaalinta labaad waxaa lagu helaa 3 dhibcood halka codka kaalinta saddexaad uu la micno yahay hal dhibic oo kaliya.
Hore ayaa codbixinta kabtanada iyo tababaryaaasha xulalka qaramada aduunka loo eedeeyay in ay codkooda ku saleeyaan nin jeclaysi, isku wadan iyo isku koox iyo waxyaabo la mid ah, waana arin wali taagan oo aad si wayn uga dhex fahmi doonto qaybaha danbe ee warbixinteena.
Aan ku bilawno xidiga abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee FIFA ku guulaystay ee Cristiano Ronaldo kaas oo Portugal kabtan u ah wuxuuna codkiisa kowaad ee shanta dhibcood u dhigma uu siiyay Gareth Bale, codka labaad ee saddexda dhibcood u dhigma waxa uu ugu deeqay Toni Kroos halka codka saddexaad ee halka cod ah uu siiyay Sergo Ramos. Sidaa daraadeed, Ronaldo ayaa saddexda cod ee uu lahaa kala siiyay saddex ciyaartoy oo ay Real Madrid ka wada tirsan yihiin.
Aan ku xigsiino Lionel Messi oo isna sameeyay wax aan ka duwayn codbixinta Ronaldo wuxuuna kabtanka Argentina uu codkiisa kowaad ee shanta dhibcood u dhigma uu siiyay Luis Suarez, codka labaad ee saddexda dhibcood u dhigmana waxa uu ugu deegay Neymar JR halka codka saddexaad ee halka cod ah uu siiyay Andres Iniesta. Ronaldo iyo Messi oo ah labada xidig ee sita tooska ah abaal marintan ugu tartamayay ayaa codkooda siiyay lix ciyaartoy oo ay isku kooxo yihiin!!!.
Laakiin kabtanka xulka qaranka Croatia ee Luka Modric ayaan codkiisa ku salayn nin jeclaysi wuxuuna si masuuliyad leh ubixiyay codkiisa isaga oo kaalinta kowaad ee shanta dhibcood ugu codeeyay Cristiano Ronaldo, halka codka labaad ee saddexda dhibcood uu siiyay Lionel Messi wuxuuna codkiisa saddexaad ee halka dhibic ah uu siiyay Neymar JR. Codka Modric ayaa ah mid muujinaya go’aankiisa ku aadan saddexda ciyaartoy ee aduunka ugu fiican.
Kabtanka xulka qaranka England ee Wayne Rooney ayaa codkiisa kowaad siiyay Cristiano Ronaldo oo ay hore uga soo wada ciyaareen Manchester United, wuxuuna codka labaad siiyay Luis Suarez halka codka saddexaad uu ugu deeqay Jamie Vardy. Kabtanka xulka qaranka Germany ee Manuel Neuer ayaa codkiisa kowaad siiyay xidiga ay isku Germany yihiin ee Toni Kroos, codka laabad isla Germany waana Mesut Ozil halka codka saddexaad uu siiyay xidiga ay isku kooxda Bayern Munich yihiin ee Robert Lewandowski.
Dhinaca tababarayaasha aan qaar ka mid ah soo qaadano waxaanan ku bilaabaynaa tababaraha xulka qaranka Portugal ee Fernando Santos kaas oo kaalinta kowaad ugu codeeyay xidiga xulka qarankiisa ee Critiano Ronaldo wuxuuna kaalinta labaad ugu codeeyay Gareth Bale halka kaalinta saddexaad uu dhigay Griezmann wuxuuna gabi ahaanba ka tagay Lionel Messi.
Tababaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate ayaa kaalinta kowaad ugu codeeyay Cristiano Ronaldo, kaalinta labaad waxa uu siiyay Antoine Griezmann halka uu kaalinta saddexaad ugu codeeyay N’Golo Kante.Laakiin Southgate ayaan liiskiisa ku soo darin Jamie Vardy oo xulka qarankiisa England ka tirsan.
Haddii aan soo qaadano tababaraha xulka qaranka Somalia ee Abdulle Mohamed waxa uu codkiisa kowaad siiyay Cristiano Ronaldo halka uu codka labaad ka siiyay Lionel Messi wuxuuna kaalinta saddexaad ugu codeeyay Griezmann. Laakiin kabtanka Somalia ee Ali Hassan ayaa sameeyay doorasho ka duwan wuxuuna kaalinta kowaad ugu codeeyay goolhaye Buffon, kaalinta labaad Andres Iniesta halka uu kaalinta saddexaad siiyay goolhaye Manuel Nueur.
Maadaama oo uu liiska kabtanada, tababarayaasha iyo saxaafada codkooda dhiibtay ay aad u dheer yihiin isla markaana aan qoraal lagu soo koobi karin waxaanu halkan idiinku haynaa liiska oo dhamaystiran laakiin waxa uu ku qoran yahay barnaamijka PDF. Si aad xogta oo dhamaystiran u dajisato ama u akhrisato halkan riix: Codbixintii Kabtanada, Tababarayaasha iyo Saxaaada Aduunka Ee Xidiga Aduunka Ugu Fiican 2016
Xogtan La share-garee asxaabtaada kale ee baraha bulshada. Warar Dheeraad Ah ka Akhriso: WWW.GOOL24.NET